ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
အဆိုပါ အစ္စရေး - ပါလက်စတိုင်းပconflictိပက္ခ အာရပ် - အစ္စရေးပArabိပက္ခကြားတွင် ၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သောအစ္စရေးနှင့်ပါလက်စတိုင်းတို့အကြားဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ပtheိပက္ခကိုအစ္စရေး - ပါလက်စတိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အများစုမှာမကြာသေးမီကသမိုင်းဝင်အတွက်ရရှိလာတဲ့ Donald J ကို Trump အားဖြင့် Abraham Accords.
ဂျိုးဘိုင်ဒင်အစိုးရသည်အမေရိကန်နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအကြားရှိဆက်ဆံမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စီစဉ်နေသည်။ တကယ်တော့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန် - ဆော်ဒီဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တနင်္လာနေ့တွင်ကြေငြာချက်အသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုဘီဒင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဆော်ဒီတွေအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေရှိမလားမသိဘူး။
Khashoggi - Assassins ဆော်ဒီသိမ်းပိုက်ထားသောလေယာဉ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
ဂျာမန်သတင်းထောက် Jamal Khashoggi သည်အသတ်ခံရပြီးစိတ်ပျက်အားလျော့စေသောဆော်ဒီအာရေဗျမှလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သည့်အဖွဲ့သည်ဆော်ဒီဘုရင်စနစ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်နှစ်စင်းကိုတူရကီသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်ကရရှိသောထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများ၏ယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ် CNN က, ကနေဒါအရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။
OPEC + တွင်ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ပူးပေါင်းရန်ရုရှားနိုင်ငံ
ဇန်နဝါရီလ 28, 2021 ဇန်နဝါရီလ 28, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအကြီးအကဲ Kirill Dmitriev ကသူ၏တိုင်းပြည်အားချီးကျူးခဲ့သည် OPEC + မဟာမိတ်အောက်တွင်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြီးခဲ့သည့်နှစ်Aprilပြီလတွင် Coronavirus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စျေးနှုန်းကျဆင်းပြီးနောက်ရေနံစျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
Brent ရေနံစိမ်းတစ်စည်လျှင် $ 55 မှတစ်ဆင့်ဖြတ်
ဇန်နဝါရီလ 9, 2021 ဇန်နဝါရီလ 9, 2021 ဂျော့ခ်ျ Mtimba	မှတ်ချက် Leave
ယခုအပတ်တွင်ရေနံဈေးနှုန်းများတက်လာပြီ စတော့ဈေးကွက်တွင်မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့် Brent ရေနံစိမ်းစျေးနှုန်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် တစ်စည်လျှင် $ 55.04 မှထပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကိုတစ်ဖက်သတ်လျှော့ချရန်ဆော်ဒီအာရေဗျ၏အစီအစဉ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအကောင်းမြင်စေခဲ့သည်။
ဒုံးကျည်များနှင့် MKs ဒုံးကျည်များကိုအိန္ဒိယစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်
ဇန်နဝါရီလ 6, 2021 ဇန်နဝါရီလ 6, 2021 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေး Aerospace စက်မှုလုပ်ငန်းများ အိန္ဒိယရှိ၎င်း၏အလတ်စားအကွာအဝေးမျက်နှာပြင်မှလေကြောင်းဒုံးကျည်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီး။ ၎င်းသည်ရန်သူလေယာဉ်အား ၅၀-၇၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ပစ်ခတ်နိုင်သည်။ အိန္ဒိယကိုရန်သူလေယာဉ်မှကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းကိုအစ္စရေးရေတပ်၊ အိန္ဒိယရေတပ်နှင့်မြေပြင်တပ်များကအသုံးပြုသည်။
ယီမင် - အေဒင်လေဆိပ်တွင်တိုက်ခိုက်မှု ၂၆ ဦး သေဆုံး
ယီမင်ရဲ့ Aden လေဆိပ်မှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည် အနည်းဆုံး ၂၆ ဦး သေပြီ နှင့် 50 ကျော်ဒဏ်ရာရ။ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိဆိပ်ကမ်းမြို့တစ်ခုဖြစ်သည့် Aden ရှိလေဆိပ်မှပုံများသည်မီးခိုးကြီးများကိုပြသသည်။ ပေါက်ကွဲမှုများ၏အကြောင်းရင်းများကိုမသိရှိရသေးသော်လည်းမျက်မြင်သက်သေအချို့ကစက်သေနတ်နှင့်မော်တာများပစ်ခတ်မှုကိုဖော်ပြသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အခြားပင်လယ်ကွေ့အာရပ်နိုင်ငံများမှသံတမန်များ ကာတာနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများအတွက်အခွင့်အလမ်း။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိဆော်ဒီအာရေဗျ၏မဟာမိတ်များသည်ကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အကျပ်အတည်းကိုဖြေရှင်းရန်လမ်းခင်းရန်တနင်္ဂနွေနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်) တွင်ပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဂျာနယ်လစ်များကာကွယ်ရေးကော်မတီ (CPJ) ၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအရတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းထိန်းသိမ်းခံရသည့်သတင်းထောက်အရေအတွက်သည်ယခုနှစ်တွင်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် CPJ ကကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်အနည်းဆုံးသတင်းထောက် ၂၇၄ ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်ဟုအင်္ဂါနေ့ကဖော်ပြခဲ့သည် CPJ ကထိုအရေအတွက်ထဲတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူများမပါ ၀ င်ပါ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အီရန်နိုင်ငံသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) မှသံအမတ်ကြီးကာဇင်ဂါရီအဘီဒီကနေတန်ဇ်၌နစ်မြုပ်နေသည့်ဗဟိုအဆင့်ဗဟိုအဆင့်ဆင့်သုံးဆင့်တပ်ဆင်ရန်အီရန်၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ IAEA သည်အဆင့်မြင့် IR-2M centrifuges များတပ်ဆင်ရန်အီရန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားသတင်းအချက်အလက်ပေးခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလ မှစတင်၍ ရေနံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပို့ကုန်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အင်တာနက်ကိုနော်ဝေးနိုင်ငံမှကြေငြာခဲ့သည်။ OPEC + သဘောတူညီချက်။ OPEC + သဘောတူစာချုပ်ကရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုတစ်နေ့လျှင်စည်ပေါင်း ၉.၇ သန်း (ခ / d) ဖြင့်လက်ရှိသဘောတူညီချက်ကာလအဆုံးဖြစ်သော ၂၀၂၂ ခုနှစ်graduallyပြီလအထိတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 30, 2020 နိုဝင်ဘာလ 30, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်အကြီးတန်းအရာရှိတ ဦး ကတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည် အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ၏အကြီးတန်းအကြံပေး Jared Kushnerလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဆော်ဒီနိုင်ငံ NEOM မြို့ရှိဆော်ဒီသရဖူမင်းသား Mohammed bin Salman နှင့်ဒိုဟာမြို့ရှိကာတာနိုင်ငံ၏စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိတ်ခ် Tamim bin Hamad Al Thani နှင့်တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။
အီရန်နျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင်ကိုလုပ်ကြံရန်လူ ၅၀ ကျော်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်
နိုဝင်ဘာလ 29, 2020 နိုဝင်ဘာလ 29, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အီရန်နျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင် Mohsen Fakhrizadeh အားသတ်ဖြတ်မှုသည်အမေရိကန်နှင့်အီရန်အကြားတင်းမာမှုများမြင့်တက်လာရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ အီရန်အာဏာပိုင်များ၏အစီရင်ခံချက်များအရသူသည် Absard ရှိသူ၏အိမ်သို့ ဦး တည်သွားသောအခါသိပ္ပံပညာရှင်အားချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်စီစဉ်ထားသောအစီအစဉ်တွင်လူ ၅၀ ကျော်ပါဝင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ ၀ င်သည်။
အစ္စရေး - အိမ်မှာဒုက္ခရောက်နေလား၊ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ပြProbleနာမရှိဘူးလား။
နိုဝင်ဘာလ 27, 2020 နိုဝင်ဘာလ 27, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အစ္စရေး ၀ န်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုသည်ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့မကြေညာဘဲလည်ပတ်ခဲ့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo နှင့်ဆော်ဒီသရဖူ Prince Mohammed bin Salman တို့နှင့်တွေ့ဆုံမည် တစ်ပတ်၏အစမှာ။ ၀ န်ကြီးချုပ်သည်အစိုးရအတွင်းရှိသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Benny Gantz အားသူသည်နိုင်ငံခြားသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြောင်းအကြောင်းကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
Nour: Khashoggi ကို MBS ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်
Jamal Khashoggi မှသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆော်ဒီသတင်းစာသည် Crown Prince Mohammed bin Salman ၏အကြံပေးထံမှခြိမ်းခြောက်မှုများကိုခံနေရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ MBS ဆွေမျိုးနှစ် ဦး အပါအဝင်ဆော်ဒီနှစ်ဆယ်, အစ်စတန်ဘူလ်၌မျက်ကွယ်၌ရုံးတင်စစ်ဆေးနေကြသည် အောက်တိုဘာလ 2018 ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိဆော်ဒီကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာ Khashoggi လုပ်ကြံခံရသည်။
Western Union က STC ကိုဝယ်သည်
နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးငွေလွှဲကုမ္ပဏီဖြစ်သော Western Union သည် STC Group ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဌာန၏ ၁၅% ကိုဝယ်ယူရန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာကပြောကြားခဲ့သည် အဆိုပါဝယ်ယူမှုသည်ကုမ္ပဏီအားရန်ပုံငွေများနှင့်၎င်း၏ရေရှည်ချဲ့ထွင်ရေးအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်ဟုစနေနေ့ကကြေငြာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဂျီဒါ - အစွန်းရောက်များကိုချေမှုန်းရန်ကတိပြု
နိုဝင်ဘာလ 13, 2020 နိုဝင်ဘာလ 13, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ကြာသပတေးနေ့ကဆော်ဒီမှ Crown မင်းသား Mohammed bin Salman အားသစ္စာကတိပြုခဲ့သည် အစွန်းရောက်များကို“ သံလက်သီး” ဖြင့်ဆက်ဆံပါ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အနောက်တိုင်းသံတမန်များကို Jeddah ကိုတိုက်ခိုက်မှုအပြီး တိုက်ခိုက်မှုကိုနောက်ပိုင်းတွင်အစ္စလာမ်မစ်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါခေါ်အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသည်။
နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါ ဥရောပစတော့ဈေးကွက်သည်ရှစ်လအထိမြင့်တက်ခဲ့သည် Pfizer နှင့် Biontech တို့အနေဖြင့် COVID-19 အားကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတွင်တိုးတက်မှုအားကြေငြာပြီးနောက်တွင်ယနေ့ဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်း, ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အောင်ပွဲ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်အမေရိကန်အတွက်ပိုမိုတည်ငြိမ်သောကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒမျှော်လင့်ချက်ပေါ်ပေါက်လာသည်။
ဘဂ္ဂဒက်တွင်သေသော ISIL တိုက်ခိုက်မှု ၁၁ ဦး သေဆုံး
နိုဝင်ဘာလ 9, 2020 နိုဝင်ဘာလ 9, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော်အဖွဲ့ဝင်များသည်ကင်းမျှော်စင်တစ်ခုနှင့်အီရတ်ရှိလူကြိုက်များသောစည်းရုံးရေးနေရာများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ အနည်းဆုံးလူတကျိပ်သတ်ဖြတ်ခြင်း။ တိုက်ခိုက်မှုတွင်လူရှစ် ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုသတင်းအေဂျင်စီများကဆိုသည်။ သားကောင်များမှာအချို့သည်အရပ်သားများဖြစ်သည်။ သတင်းအေဂျင်စီများကဘဂ္ဂဒက်အနီးရှိအဖွဲ့ ၀ င်များ၏တိုက်ခိုက်မှုအသစ်ကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရေတိုရေနံစိမ်းအနာဂတ်တွင် ၅၀ ဆင့်တက်သည်
နိုဝင်ဘာလ 2, 2020 နိုဝင်ဘာလ 2, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
တနင်္လာနေ့ကအမေရိကန်ဈေးကွက်မဖွင့်မီရုရှားစွမ်းအင်ဝန်ကြီး Alexander Novak သည်ရေနံကုမ္ပဏီများနှင့် OPEC + ထုတ်လုပ်မှုဖြတ်တောက်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ WTI ရေနံစိမ်းအနာဂတ်မြင့်တက်ခဲ့သည် ရေတိုအတွက် $ 0.50 အားဖြင့်၎င်း, Brent ရေနံစိမ်းအနာဂတ်သည် ၀.၄၀ ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့သည် ရေတို၌တည်၏။
အောက်တိုဘာလ 30, 2020 အောက်တိုဘာလ 30, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အီဂျစ်၊ ဂျော်ဒန်နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) အပါအ ၀ င်အာရပ်နိုင်ငံအတော်များများသည်ကြာသပတေးနေ့ကနစ်စ်ချာ့ချ်တွင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအားပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်သည်။ ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်အစ္စလာမ်၏တန်ဖိုးများမှကနေဖယ်။ တိုင်းပြည်တိုင်းက ၄ င်းတို့၏နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနများမှတဆင့်ကြေငြာချက်ထုတ်ပေးသည်။
အောက်တိုဘာလ 23, 2020 အောက်တိုဘာလ 23, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြောကြားခဲ့သည် OPEC + ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်များတွင်နှောင့်နှေးမှုဖြစ်နိုင်ချေကိုရုရှားကပယ်ဖျက်မထားပါ။ ဤနောက်ဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာက OPEC သည်ရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကန့်သတ်ထားနိုင်ကြောင်းပြသသည်။
အောက်တိုဘာလ 22, 2020 အောက်တိုဘာလ 22, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ကြာသပတေးနေ့တွင်, နိုင်ငံတကာရေနံဈေးနှုန်းများကျဆင်း OPEC + ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ သို့သော်ဥရောပနှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိ coronavirus ရောဂါအသစ်များထပ်မံမြင့်တက်လာခြင်း၊ အမေရိကန်၏စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအစီအစဉ်နှင့်ညှိနှိုင်းမှုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ယူအက်စ်ဓာတ်ဆီသိုလှောင်မှုအားလုံးသည်လောင်စာဆီဝယ်လိုအားကိုပိုမိုဆိုးရွားလာစေသည်.
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick အောက်တိုဘာလ 4, 2020 အောက်တိုဘာလ 3, 2020 FTBurroughs	မှတ်ချက် Leave
သမ္မတ Donald Trump၊ Jared Kushner နှင့်သူတို့၏သံတမန်အဖွဲ့မှ Kudos ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ဘာရိန်းတို့ကိုအစ္စရေးအားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသောအာရပ်နိုင်ငံများစာရင်းတွင်သူတို့ကသံတမန်ရေးရာနှင့်အခြားဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်သဘောတူထားသည့်အာဗြဟံသဘောတူညီချက်များမှတစ်ဆင့်
သမ္မတ Trump ၏သဘောတူညီချက်များကိုအပေးအယူလုပ်ခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့်နော်ဝေးမှအရာရှိတစ် ဦး ကသူ့ကိုနိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ အစ္စရေးနှင့်ယူအေအီးနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ဘာရိန်းတို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များသည်ရှုပ်ထွေးပြီးအဆင့်နှစ်ဆင့်သာကိုယ်စားပြုသည်ဟူသောအချက်ကိုလုံးဝမေ့မထားနိုင်ဖြစ်နေသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ရှည်လျားသောဖြစ်စဉ်ကို။ အာရပ်နှင့်ပါလက်စတိုင်း၊ ဆွန်နီနှင့်ရှီအာ၊ အာရပ်နှင့်အီရန်နိုင်ငံတို့အကြားသဘောတူညီချက်များကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲသောအရှေ့အလယ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖြစ်မရောက်မီအောင်မြင်ရမည်။
တူရကီသည် Khashoggi လူသတ်မှုတွင်ဆော်ဒီနောက်ထပ်ခြောက် ဦး အားစွဲချက်တင်
စက်တင်ဘာလ 28, 2020 စက်တင်ဘာလ 28, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
တနင်္လာနေ့က Istanbul အစိုးရရှေ့နေ သံသယရှိသူဆော်ဒီ ၆ ယောက်အားစွဲချက်တင် အတိုက်အခံဂျာနယ်လစ် Jamal Khashoggi ၏ ၂၀၁၈ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလူသတ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိခြင်း။ အစိုးရရှေ့နေကသံသယရှိသူ ၂ ဦး ကိုထောင်ဒဏ်တသက်နဲ့ကျန် ၄ ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်
စက်တင်ဘာလ 26, 2020 စက်တင်ဘာလ 26, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
ဆော်ဒီအာရေဗျဘုရင် Salman bin Abdulaziz ကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းအားအီရန်အားအလွန်ယုံကြည်မှုနှင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီခြင်းမပြုရန်သတိပေးခဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကုလသမဂ္ဂ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်သူကတီဟီရန်သည်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ၎င်း၏အာဏာကိုသာထုတ်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 14, 2020 စက်တင်ဘာလ 14, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အောက်ပါ သဘောတူညီချက် ယူအေအီးနှင့်အခြားအာရပ်နိုင်ငံဘာရိန်းတို့နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်သည်အစ္စရေးနှင့်အမေရိကန်တို့၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိရန်အတွက်အစ္စရေးနှင့်အမေရိကတို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်းသစ်အတွက်အဆင့်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကန့်ကွက်မှုကိုစဉ်းစားရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သော အပေးအယူမဆိုအမျိုးအစားမှပါလက်စတိုင်း၏။
ရုရှားသည် Nukes ကိုရှာဖွေရန်နည်းပညာအသစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 10, 2020 စက်တင်ဘာလ 10, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားကနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေကိုအဝေးကနေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်မယ့်ကိရိယာတစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့တယ်။ အဆိုပါကိရိယာကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် Mephi Nuclear တက္ကသိုလ်။ စက်ရုံကို ၀ င်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် RED-100 neutrino detector ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာလ 8, 2020 စက်တင်ဘာလ 8, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Haaretz သည် Chuck Freilich မှရေးသားသောထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် “ နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်သောဆော်ဒီအာရေဗျသည်အစ္စရေးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိတ်ဖက်ဖြစ်နိုင်ပါသလား” အဆိုပါဆောင်းပါးအားဖြင့်ရေးသားခဲ့သည် ချားလ်စ် Freilich, ယခင်အစ္စရေးလက်ထောက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနှင့်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် Belfer စင်တာတွင်တာရှည်ခံအကြီးတန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
Saudis သည် Khashoggi လူသတ်မှုအတွက်ဝါကျကိုလျှော့ချသည်
စက်တင်ဘာလ 8, 2020 စက်တင်ဘာလ 8, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဆော်ဒီအာရေဗျတရားရုံးကတနင်္လာနေ့တွင်နိုင်ငံ၏တရားရေးဌာနရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် လျှော့ချ ဂျာနယ်လစ် Jamal Khashoggi ကိုသတ်မှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂၀ အထိချမှတ်ခံရသောလူ ၅ ဦး ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်း ပထမ ဦး ဆုံးအမှု၌, စွပ်စွဲခံရသူသေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ဘာရိန်းသည်အစ္စရေး - ယူအေအီးလေကြောင်းခရီးစဉ်များသို့အာကာသစခန်းဖွင့်
စက်တင်ဘာလ 4, 2020 စက်တင်ဘာလ 4, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ဘာရိန်းသည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အစ္စရေးတို့အကြားတိုက်ရိုက်ပျံသန်းရန်၎င်း၏လေကြောင်းနယ်ပယ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တရားဝင်ပြည်နယ်သတင်းအေဂျင်စီ BNA ကကြာသပတေးနေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည်ဘာရိန်းအားအီရန်စ်သို့သွားမည့်အစ္စရေးလေယာဉ်များအား၎င်း၏လေကြောင်းကိုဖွင့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ထိပ်တန်းဆော်ဒီစစ် ဦး စီးချုပ်၊
စက်တင်ဘာလ 1, 2020 စက်တင်ဘာလ 1, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ဆော်ဒီမီဒီယာအစီရင်ခံစာများအရသိရသည်တော်ဝင်မိသားစုနှင့်အကြီးအကဲပူးတွဲအင်အားစု၏အကြီးအကဲမင်းသားဖာဒင်ဘင်တာကီနှင့်အယ်လ်ဂျောဖ်ဒေသဒုတိယမြောက်စော်ဘွားများဖြစ်သောသားဖြစ်သူအဗ္ဗဒူလာဇစ်ဘင်ဖာ့ဒ်တို့သည်ဆော်ဒီအစိုးရမှအလုပ်ဖြုတ်ခံရပြီးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ စွဲချက်။
ဂျာမန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ ဦး စားပေးသည်“ အစိမ်းရောင်” ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည်မြောက်အမေရိကတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုတင်သွင်းမှုသည်အာဖရိကရှိသောက်သုံးရေရှားပါးမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းအဓိကမေးခွန်းတစ်ခုကစဉ်းစားနေသည်။
အစ္စရေးအလှည့်ကျ: Balloon Fire, Coronavirus Lockdown Continue
သြဂုတ်လ 28, 2020 သြဂုတ်လ 28, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
တောက်ပသောမီးတောက်များဖြင့်အစ္စရေးသည်ဂါဇာမှဟားမတ်စ်အားလောင်ကျွမ်းသောပူဖောင်းများနှင့်ဒုံးကျည်များကိုတိုက်ခိုက်နေသည်။ နယ်စပ်တလျှောက်တွင်နေထိုင်သောအစ္စရေးအရပ်သားများသည်ဂါဇာမှသူတို့ကိုလောင်ကျွမ်းသောပူဖောင်းများကြောင့်တမင်ကြံစည်သောတောမီးများကြောင့်အဆက်မပြတ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသည် တိုက်ခိုက်မှုများသည်ယူအေအီးနှင့်အစ္စရေးငြိမ်းချမ်းရေးမကြေငြာမီရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။
ယီမင် - ခွဲထွက်ရေးသမားများသည်ရိုင်ယာသဘောတူညီချက်မှနှုတ်ထွက်သည်
သြဂုတ်လ 26, 2020 သြဂုတ်လ 26, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ယီမင်ရှိတောင်ပိုင်းအကူးအပြောင်းကောင်စီ “ တောင်အာဖရိကမှာအာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုတွေမှာပါ ၀ င်မှုတွေကိုသူကဆိုင်းငံ့ထားပြီးပါပြီ။Riyadh သဘောတူညီချက်။ " ကောင်စီအနေဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်မှုအားရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Freelance Gigs သည်အာရပ်စီးပွားရေးအတွက်ရေနံထက်ပိုကောင်းသလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 22, 2020 သြဂုတ်လ 22, 2020 လက်ကားနှင့် B2B သုံးသပ်ချက်များ	မှတ်ချက် Leave
အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ၂၀၂၀ တွင် ၈.၈% ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် အီဂျစ်, ဖြစ်နိုင်လျှင်အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသောအာရပ်နိုင်ငံ၊ ၂% တွင်သာကြီးထွားလာနိုင်ပြီးဒေသတွင်းရှိရေနံထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံအများစုသည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ Covid-2 ပေါင်းစပ်မှုကဒေသလူ ဦး ရေကိုထိခိုက်စေပြီးရေနံကျဆင်းခြင်းသည်ဤဒေသကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။
အာရပ်ရေနံတင်ပို့သူများသည် ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရေနံတင်ပို့မှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျှော့ချနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းနေကြသည်။ ၎င်းသည် OPEC သဘောတူညီချက်များမှအတည်ပြုထားသောအဆင့်များ။ ထုတ်လုပ်မှုသိသိသာသာဖြတ်တောက်မှု၊ ရေနံတစ်စည်လျှင် ၄၂ ဒေါ်လာနှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက်များသို့ Covid အပေါ်သက်ရောက်မှုသည်ဒေသစီးပွားရေးအပေါ်သိသိသာသာဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
Roundသရေလအမျိုးသည်အဝိုင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုကြီးထွားလာခြင်း၊
သြဂုတ်လ 21, 2020 သြဂုတ်လ 21, 2020 David Wexelman	မှတ်ချက် Leave
အာဗြဟံသဘောတူညီချက် - အစ္စရေးနှင့်ယူအေအီးတို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်သည်အစ္စရေးအားလုံးနီးပါးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်မှုအတွက်အစပြုခဲ့သည်။ ယူအေအီးသည်အစ္စရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပထမဆုံးပြုလုပ်သောပင်လယ်ကွေ့အာရပ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အီဂျစ်နှင့်ဂျော်ဒန်သည်အစ္စရေးနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်
အစီရင်ခံစာ - ယူအေအီးနှင့် F-35 သဘောတူညီချက်ရရှိသည့် Kushner
သြဂုတ်လ 21, 2020 သြဂုတ်လ 21, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Anwar Gargash ကသူ၏နိုင်ငံသည် F-35 လေယာဉ်များဝယ်ယူရန်အတွက်“ တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများ” ကိုတင်သွင်းခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့, CNN တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ၏ယောက္ခမဖြစ်သူ Jared Kushner သည်သဘောတူညီမှုကိုပြီးစီးရန်ကြိုးပမ်းမှုနောက်ကွယ်တွင်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် OPEC + Cajoles လိုက်နာမှု
သြဂုတ်လ 20, 2020 သြဂုတ်လ 20, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ရိုက်တာသတင်းဌာန၏အဆိုအရရေနံ ၀ ယ်လိုအားနှေးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကြောင့်ရေနံတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများအဖွဲ့ (OPEC) နှင့်၎င်း၏မဟာမိတ်များ (OPEC +) သည်သြဂုတ်လတွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သောရေနံထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများသို့ဖိအားပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် - စက်တင်ဘာ
ဘူရွတ်ကိုဝိုင်း Vultures, လက်ဘနွန်အဘို့အဘယ်သို့ဆိုင်ဖြစ်သနည်း
သြဂုတ်လ 12, 2020 သြဂုတ်လ 12, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဘေရွတ်သည်သြဂုတ်လ ၄ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြေကွဲဖွယ်ပေါက်ကွဲမှုမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ယခင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုပျက်ကွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၀ န်ကြီးချုပ်နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပေါက်ကွဲမှုနောက်ပိုင်းတွင်မငြိမ်မသက်မှုများနှင့်ဒေါသများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ရဲနှင့်စစ်တပ်နှင့်တိုက်ပွဲများအတွင်းဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 10, 2020 သြဂုတ်လ 10, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
Bloomberg သတင်းကဖော်ပြသည် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကောင်စီမှကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသို့ပေးပို့သောစာမိတ္တူတစ်စောင်ရရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်အီရန်အားလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်လုံခြုံရေးကောင်စီအားတောင်းဆိုလိုက်သည်။
MBS သည်ကနေဒါသို့“ Death Squad” ပို့နေသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်
သြဂုတ်လ 7, 2020 သြဂုတ်လ 7, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ယခင်ဆော်ဒီမှလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတစ် ဦး ကဆော်ဒီသရဖူ Mohammed bin Salman ကိုစွပ်စွဲသည်။ သူ့ကိုသတ်ရန်ကြိုးစားရန်ကြံစည်၏။ အနောက်တိုင်းလျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နီးစပ်သူ Saad Aljabri ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုတွင်ထိုကဲ့သို့သောကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသည်ကနေဒါအေးဂျင့်များက ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တားဆီးခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ 29, 2020 ဇူလိုင်လ 29, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ဟဂ်ျဘုရားဖူးသည်ဆော်ဒီအာရေဗျမက္ကာတွင်စတင်ခဲ့သည်Coronavirus ပြန့်ပွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ယခုနှစ်တွင်ဘုရားဖူးအရေအတွက်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှလူ ဦး ရေ ၂ သန်းအထိတက်ရောက်ကြသည် ဟာ့ဂ်ျ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသို့သော်ယခုနှစ်တက်ရောက်ရန်ဆော်ဒီလူမျိုး ၁၀၀၀၀ သာခွင့်ပြုထားသည်။
အီရတ် ၀ န်ကြီးချုပ်ကာဇီမီသည်အီရန်သို့လာရောက်
ဇူလိုင်လ 21, 2020 ဇူလိုင်လ 21, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အီရတ် ၀ န်ကြီးချုပ် Mustafa Kazemi သည်အီရန်သို့ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်စတင်ခဲ့သည် အင်္ဂါနေ့တွင်အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကသတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကအီရတ် ၀ န်ကြီးချုပ်အားအီရန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အားတရားဝင်လက်ခံကြိုဆို \_ t နှစ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးမည်။
ယီမင် - ယူအက်စ်သင်္ဘောများ၊ အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်ပစ်မှတ်လှေများ
ဇူလိုင်လ 9, 2020 ဇူလိုင်လ 9, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo ကကြေငြာခဲ့သည် အမေရိကန်နှင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များသည်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုသိမ်းဆည်းရမိ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ယီမင်ရှိ Houthi သူပုန်များအတွက်အီရန်လက်နက်များတင်ဆောင်လာသည့်ခရီးသည်အားလုံး၏အမည်များကိုမဖော်ပြပါ။ Pompeo သည်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအားအီရန်အပေါ်လက်နက်တင်ပို့မှုတိုးချဲ့ရန်ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်သည်။
Khobar Towers Attack ကိုအမေရိကန်တရားရုံးမှဒေါ်လာ ၈၇၉ သန်းဆုချီးမြှင့်သည်
ဇူလိုင်လ 8, 2020 ဇူလိုင်လ 8, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်မီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့သည် ဒဏ်ရာရရှိသူများနှင့်ပထမတန်းစားမိသားစုများအားဒဏ်ငွေနှင့်လျော်ကြေးပေးရန်အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံအားအမိန့်ပေးခဲ့သည် ၁၉၉၆ Saudi Arabia ရှိ Khobar Towers အားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု။ တိုက်ခိုက်မှုသည် ၂၀ သေဆုံးပြီး ၄၉၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Khashoggi Killers အပေါ်ယူကေကအရေးယူအပြစ်ပေးသည်
ဇူလိုင်လ 7, 2020 ဇူလိုင်လ 7, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
တနင်္လာနေ့မှာ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအစိုးရကပိတ်ဆို့မှုအသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည် ရှေ့နေ Sergey Magnitsky ၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနှင့်လူသတ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည့်ရုရှားနိုင်ငံသား ၂၅ ဦး နှင့် Saudis ၂၀ တို့သည် ဂျာနယ်လစ် Jamal Khashoggi ကိုသတ်မှု.